Rosiana mpizahatany efatra no hita faty tao amin'ny hotely Albaney sauna
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Albania » Rosiana mpizahatany efatra no hita faty tao amin'ny hotely Albaney sauna
Vaovao Mafana Albania • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Rosiana mpizahatany efatra no hita faty tao amin'ny hotely Albaney sauna.
Araka ny tatitra sasany, sempotry ny fizahan-tany ny mpizahatany noho ny rafitry ny rivotra.
Ny mpizahatany rosiana dia maty tao amin'ny hotely Andrefan'i Albania.
Mandinika ny fahafatesan'ny mpizahatany rosiana efatra ny solontenan'ny masoivoho rosiana.
Rosiana mpizahatany no hita faty tao amin'ny hotely iray tao amin'ny vohitra Kerret any amin'ny distrikan'i Albania Kavaja andrefana.
Solontenan'ny iraka diplaomatika Rosiana any Tirana, Albania dia nilaza fa mpizahatany rosiana efatra no hita faty tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray tao amin'ny vohitr'i Kerret any amin'ny distrikan'i Kavaja any andrefan'ny Albania.
Mpikambana ao amin'ny fizarana kaonsily ao amin'ny masoivohon'i Russia ao Albania manadihady ny antsipirian'ny fahafatesan'ny mpizahatany rosiana.
"[Izy ireo] dia manadihady ny zava-misy," hoy ny mpitondra tenin'ny masoivoho.
Araka ny filazan'ny gazety Albanian Daily News, mpizahatany rosiana efatra no hita faty tamin'ny zoma lasa teo tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray tao amin'ny tanàna Kerret any amin'ny distrikan'i Kavaja any Albaniaandrefana.
Sempotra avokoa izy rehetra, hoy ilay boky momba ny loharanom-baovao avy amin'ny polisy.
Indrindra indrindra, ny polisy dia mandinika raha toa ka mandeha tsara ny rafitry ny rivotra ao amin'ny sauna.
Ny maty, lehilahy roa sy vehivavy roa, 31 taona ka hatramin'ny 60 taona.